साञ्जेन र रसुवागढीको आइपीओ बैशाख ६ देखि, कति कित्तासम्म आवेदन दिन पाइन्छ ? Bizshala -
साञ्जेन र रसुवागढीको आइपीओ बैशाख ६ देखि, कति कित्तासम्म आवेदन दिन पाइन्छ ?
काठमाण्डौ । साञ्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमीटेड र रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमीटेडले बैशाख ६ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि आइपीओ निश्कासन गर्ने भएका छन् ।
यसअघि दुवै कम्पनीले बैशाख २ गतेदेखि सेयर निश्कासन गर्ने तयारी गरेका भए पनि उर्जा मन्त्रालयले ६ गतेबाट निश्कासन गर्न सुझाव दिएपछि पूर्व योजना भन्दा ४ दिन ढिलो गरी आइपीओ निश्कासन हुने भएको साञ्जेन जलविद्यूत कम्पनीका कम्पनी सचिवले जानकारी दिए ।
यी दुई आयोजनालाई पनि सरकारले जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत समेटिदिएपछि दुवै कम्पनीले बैशाख ६ गतेदेखि आइपीओ निश्कासन गर्ने भएका हुन् ।
सरकारले यसअघि जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तरगत १९ वटा आयोजना छनौट गरिसकेको छ । यसमध्ये त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीले रु. १० बैनामा सेयर समेत बिक्री गरिसकेको छ ।
छानिएका १९ मध्ये त्रिशुलीपछि दोश्रो आयोजनाको रुपमा तामाकोशी पाँचौको सेयर निश्कासनको आवश्यक पूर्व तयारी समेत थालिएको बेला रसुवागढी र साञ्जेन पनि समेटिएका हुन् । अब दोश्रो चरणमा आइपीओ निश्कासन गर्ने आयोजना रसुवागढी र साञ्जेन बन्नेछन् ।
रसुवागढी र साञ्जेन आयोजना समेत समेटिएसँगै जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तरगत आयोजनाको संख्या २१ पुगेको छ ।
त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीको जस्तो यी दुई आयोजनाको आइपीओ रु. १० मा बैना गरेर भने पाइने छैन । दुवै आयोजनाको काम निकै अगाडि बढिसकेको(५० प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेका) कारण प्रतिसेयर १०० रुपैयाँकै दरमा आइपीओ निश्कासन हुनेछ ।
दुवै कम्पनीको आइपीओ छिटोमा बैशाख १० गतेभित्र र ढिलोमा जेठ ५ गतेभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ ।
रसुवागढीमा न्यूनतम ५० देखि अधिकतम ५ हजार कित्ता र साञ्जेनमा न्यूनतम ५० देखि अधिकतम २००० हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सकिन्छ ।
rasuwagadhi hydro project sanjen hydropower project initial public offering(IPO)